Ebee ka uber dị na SMF? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Uber sacramento address - ịchọta ihe ngwọta
Uber sacramento address - ịchọta ihe ngwọta
Ebee ka uber dị na SMF?
SakramentiỌdụ ụgbọ elu mba ụwa ahọrọla ebe a na-eburu ụgbọ elu maka ọrụ ndị njem na-eji ngwa dịkaUberna Lyft na mbọ iji belata nkwado ndabere na ngwụcha Terminal B.30 nov. Ọkt 2018
* ooooooOOOOOOOOOOOO ** isiokwu sitere na GTA SA ** nom mon ** pịa ** beeb mana ọ bụ mbipụta Big Anwụrụ ọkụ ** ụra * - Enwere m ike ịnabata usoro gị? * Nzọụkwụ na aka ekpe ** nzọụkwụ ** nzọụkwụ na-esote ** 2x ntị ndina n'ike ụkwụ ** whOOOOm * -Enwere m 45 nọmba 9.. nọmba 9 EXTRA LARGE... na Numba 6 gbakwunyere nnukwu 45 extra big di... a Numba 7 with an extra number 9 fib... a Numba 9 nọmba 45, onye nwere extra nnukwu cheese na extra nnukwu itinye cheese soda. * Wbom ** .. Kpatụ .. * AaaAA-Ọ na-efu $ 400,000 - Oh, shit * si n'ebe dị anya * - CJ! - HELE MEEE! - Oo chi m akpọọ m ọkụ! - Ụchụ gbakwa! - nla ** ker. * mkpọtụ nke Roblox * * jk * - Wu Zi Mu, mana ndị enyi m kpọrọ m Woozie .- aha m bụ uvuvwevwevwe onyetenyevwe ugwemubwem ossas * heheheheee * - kedu? ** njikọ ** njikọ * Ndewo? Chei, Quazzup? Achọrọ m enyemaka gị, ị bịara ebe a? ehee, enweghị m ike ịzụta NUMBANINESOkay, ọ dị mma, ngwa ngwa bịa ebe a.
Ahụghị m em. Ihe ị na-ekwu na enweghị m ike ịhụ ya, ọ bụ naanị DIPKedu ihe ị pụtara na enwere naanị DEAP? Ọ pụtara na e nwere naanị DIPWell, mgbe ahụ, Bịa DIP ILE! Ihe niile ị ga-eme ya GOSIRI ya MIRs enwere ọtụtụ DIPKedu ihe ị pụtara na gị na ya * enwere DIP ọzọ? * onwere nani Moar DIP gaa na nke ozo ile ka enwere DIP Ebee ka i no ugbua? Anọ m na DIP G WHATN YOU KA ME P YOUR YOU YOUB D M pụtara na itinye! Kedụ ahịa ị na-eme? Enweela m ụlọ ahịa nkwụsị! GYN ARE B YOU NA NUM NA-AH NUM NỌMBA 9S NA THElọ Nche DIP?! * WHOooM ** OOOOOOOOOOOOOOOOOO ** oooooooooooooooooooo ** OOOOOOOOOOOOoooooo .. * Whata Fuck? Etgbọ mmiri! ỤCHỤ! MBA! Akpọrọ M Oyi Asị! Tọ: Mamafu ** er! Ryder: Kedu ihe ị na-eme? * Iji nweta votu maka ndepụta okwu * - Kedụ ka ị mere n'ime mmiri? * Punch ** splash * - Hehehehehe- Eeee- Gini ka ina ekwu na * enwere CHEESE *? - Enwere naanị cheese karịa - Gaa na ile nke ọzọ! - A ka nwere CHEESE- Ebee ka ị nọ ugbu a? - M na CHEESE- G DON DO KA ME NA CHEESE? - M na-ekwu na chiiz! - Kedu ụlọ ahịa ị nọ? - Achọtara m ụlọ ahịa aghụghọ! - G WHNY KA Y NA-ACH NUM NUMB A 9S NA Clọ Ahịa? * UWU * - Amaghị m CJ * OOOOOOOOOHHHH * - Kedu ka ị si nọrọ na mmiri? - Emela ka iwe wee m. * Punch ** splash * - Hehehehehe- Hehehehehehehe .. .- heeeeee .. * earapeboom ** nzọ ụkwụ * - HAVEHỌRỌ WLỌ NA-ezighị ezi Hlọ rụrụ arụ! - Aaaa! - OOOOOOOOHHHHH * SMS sitere na CJ ** sms ọhụrụ * * malitere igwu egwu na 90s ** sms * - Ọ na-efu $ 400,000 :) - OHHELLOTHERE * NOM * - Extra dip and chyyyyyysss) 0) * OOOOOOOOOOHHooH nom * - Hey, Woouzi .- Kedu ka ị bụ n'ime mmiri? - Kedu ihe ị chere? Enwere m ike igwu mmiri - Ee, ị dị mma igwu mmiri? - Ee, enweghị m ike. * punch ** splash * - hehehe-hehehhe- Woozi! Chei ya - Enwere m nzuzu, Carl, ọ bụghị onye nzuzu. * Am ** bido kpoo ahihia anwuru oku ubochi obula ** Onu ogugu 9 buru ibu ** isii na mgbakwunye itinye .. ** iri anọ na ise na cheeeeeeeeeeese .. ** Aka nri-nri ka anyị rie !. ** Nye m Onu Numba Nine ** Isii ya na ndi ozo ** Nwoke .. ** Nke ahu bu ezigbo SSSHIET .. * - Whata Fuck? -Heheheheh ..- Aaaaaaa !!!!! - Hehehehehehehe-hehehehehehehe-heheheheheh.- EEEEEEEEEEEEEEEEEEE! - Biko enwere m ike ịnabata usoro gị, biko? - Sir, enweghị m ike ịnụ olu gị! Anaghị m anụ olu gị - biko ị nwere ike ikwu okwu nwayọ karịa ma doo anya?
Uber ọ na-arụ ọrụ na Sacramento?
Mezue atụmatụ gị taa site na idozi ihe ị ga-eji gbaa ọsọUbern'imeSakramenti. Rịọ ịnyịnya ruo ụbọchị 30 tupu oge eruo, n'oge ọ bụla na n'ụbọchị ọ bụla n'afọ.
kedu nke na-eme onye ọ bụla ka anyị kwuo maka isi obodo steeti California Sacramento aha a na-akpọ Sacramento bụ naanị ụdị akpa sacramenti ruo ebe Sacramento dị ebe a, ọ bụrụ na ịmaghị na ọ bụ ihe dị ka elekere na ọkara ka elekere abụọ site na San Francisco ma o buru ihe dika otu elekere na nkeji iri na ato site na onodu ebe enyi Sacramento nwere onu ogugu ndi bi na 500,000 ma o nweghi onye n’ime ha maara ebe enyí ehi e guzobere na 02/27/1850 mgbe akpọrọ Sacramento ọhịa gị n’aha Onye Kraịst. ziri ezi, oriri-nsọ nke Holy Eucharist ka amara nke ọma dị ka oriri nsọ ma ọ bụrụ na ị maghị ihe niile m ga-akọwa udo dị nsọ bụ emume ị ga-eme mgbe ndị mụrụ gị manyere gị ịga ụlọ akwụkwọ Katọlik, na m ikpe site na ọkwa mbụ ruo ọkwa nke asaa mgbe ndị nọn kpebiri na ọ ga-ezuru enyi gị ochie el Briggs wee gwa ndị mụrụ m na ọ baghị uru ịnọ m ebe ahụ ọzọ. O kwuru n'ezie na akwụkwọ ozi, o doro anya na m chụpụrụ onye nọn t o nwere ihe isi ike ụbọchị mmanya, ma hey azụ n'ihe nke udo n'oge N'oge ofufe ọrụ onye ọ bụla n'ahịrị n'ihu nke ụka na onye nchụàjà na-ewe a di na nwunye nke nnukwu sips mmanya, sụọ ngọngọ ala ebe ịchụàjà na-amalite n'ịnọgide achịcha ọnụ gị nke na-atọ ka ọ bụ nke akwụkwọ na mpempe akwụkwọ Dashof Elmer nke na-agagharị na Sacramento, na-abụ ebe ndị mmadụ na-anọghị na Bay Bay. Gịnị kpatara na ọ bụghị nnukwu obodo, mana dị ka obodo niile, ọ bụghị maka mmadụ niile, yabụ gịnị kpatara ya? Jidere otu iko mmanya na ikpere gị wee lelee ihe iri kacha elu m mere ịghara ịkwaga Sacramento Nọmba iri ọ bụ isi obodo Sacramento bụ isi obodo, nke pụtara na mpaghara ndị dị ala adịghị mma iji nọrọ ebe ahụ ibi, e nwere oke ọtụtụ okporo ụzọ na ogbe ndịda obodo na ọbụna na mpụga nke etiti obodo n'oge ọ bụla nke ụbọchị otú ị ga-esi ike ịchọta na-adọba ụgbọala.
Enwere ọtụtụ ndị njem na oge ọ bụla n'afọ na isi obodo nke steeti California na-abụkarị ebe dị mma maka mgbakọ na ngagharị iwe ịpụ na m nọ naanị na Ọktọba ikpeazụ, naanị maka otu ụbọchị mgbe m nọ ebe ahụ mgbe m nọ ebe ahụ achọpụtara m na ha nwere ụdị mgbakọ na ha nọ ebe niile, ọ bụrụ na ndị a nọ mgbe ọ bụla, ọ dị ka ụfọdụ Amway amamịghe si Mexico, ha niile ji ejiji otu ihe niile mere dị ka òtù nzuzo ọ bụ ọnụọgụ itoolu nke n'okporo ámá Ọtụtụ ndị bi n'obodo ahụ dum mere mkpesa banyere n'okporo ámá ebe a ụfọdụ na-ekwu na e nwere ọtụtụ olulu ma ugbu a ị ga-eche na ndị isi nọ n'okporo ámá a mgbe ị hụrụ na ọ bụ isi obodo na ndị ọzọ niile mere mkpesa banyere ụzọ mmanya okporo ụzọ. na mpaghara ụfọdụ na-eme ka ha na-arịa ọrịa oge niile. Ọ bụrụ n ’ị gaa leta ụlọ ma ọ bụ kwaga n’ụlọ, ị ga - ahụ nke a ma kwụsị ide ihe, amaara m na amachaghị ebe niile dị ka igwe eji agba agba. Anọla ebe ahụ n'ọnwa Ọktọba dịka m kwuru na oge ole na ole gara aga afọ ole na ole gara aga na ụfọdụ n'ime mpaghara ndị a dị ka Riverside Pocket Little Pocket na Southland Park e si ebe ahụ nwee ike inwe obere mgbagwoju anya. Ekwenyesiri m ike na ọ dị obere ugbu a enwere na ha anọdụwo ọdụ ụgbọ mmiri na ekwentị onye ọ bụla n'ụgbọala, mana ọnụọgụ asatọ bụ okpomoku Sacramento na-ekpo ọkụ n'oge oyi anaghị adịkarị n'okpuru etiti afọ 1940 n'oge okpomọkụ nwere ike ịbanye ọtụtụ narị mmadụ n'ụbọchị ezigbo ọkụ, mana ha na-anọkarị. N'oge ọkọchị gburugburu 90s mgbe m nọ ebe ahụ na Ọktoba ọ dị ogo 95, Ọktọba ekwesịghị ịbụ ogo 95, nke ahụ bụ eziokwu, ndị otu nzuzo niile a nwere ha na-ele anya na-ahụsi anya oh oke ọnụọgụ asaa ndị bi n'obodo ukwu na-enweghị ebe obibi bụ a nnukwu okwu ebe a na sactown, ọ bụ ihe nwute mara na gburugburu 4,000 ndị mmadụ na obodo ahụ na-enwe ihe isi ike oge en na ugbu a na-amanye ibi n'okporo ámá na-akwụsị dee m n'aka na ụfọdụ bụ ndị dị arọ ọgwụ ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ị chọrọ agba ha, t ọ bụ eziokwu bụ na ụmụ amaala ndị ọzọ na-ebi n'okporo ámá na ụfọdụ enweghị ya n'onwe ha ugbu a Ewere onwe ha Ma a ka nwere ọtụtụ ndị na-enweghị ebe obibi na-adịghị erite uru n'ụlọ ezumike na mmemme ndị ọzọ na steeti.
Ọ bụ ihe ihere na ha nwere ọtụtụ. Mgbe m nọ ebe ahụ n’October, ha niile nọ n’ogige ntụrụndụ. Ozi ọma ahụ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ onye ndu n'otu ebe? Naanị jụọ otu onye n’ime ha ma na obodo ahụ bụ nke isii.
Mpụ dị oke ebe a na Sacramento maka mmadụ 100,000 ọ bụla fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpụ 4000 ka ị na-eme mgbe ị nọ n'obodo ahụ, ị ​​nwere ohere 1 n'ime 28 nke itinye aka na mpụ na ị nọ naanị nchekwa ebe a karịa pasent 10 nke obodo ndị ọzọ na United States, nke pụtara na naanị 10 pasent nke obodo obodo dị njọ karịa Sacramento, nke na-abụghị ezigbo ọnụ ọgụgụ, mkpokọta mpụ niile bụ 32 Pasent dị elu karịa nkezi mba na oge ikpeazụ nke 2018, onye ọkwọ ụgbọ ala Uber kpebiri Oberon abụghị ' t ebe ọ chọrọ ọrụ, ya mere o kpebiri ịbụ onye ntọrọ mmadụ mgbe ọ nwere ụmụ agbọghọ atọ n'ime ụgbọ ala iji nyere ụmụ agbọghọ aka ịpụ ma nwee nchekwa, naanị ntakịrị iwe na enwere m ike iche na ọ ga-enwe nsogbu. Nọmba ise mmetọ California na-elekọta maka ịbụ onye ruru unyi, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na Sacramento bụ otu n'ime obodo kacha sie ike na steeti na mmetọ mmetọ karịa nke mba m nwere ike ịgwa gị na ọ dị ntakịrị nkụda mmụọ mgbe m nọ ebe ahụ na Ọktoba mgbe m e nwere gara na mmalite nke 2000s anaghị m echeta na ọ bụ na unyi m n'ezie abụghị ogbe ndịda na ọtụtụ n'oge ahụ ọ bụ m na ọ jọgburu echetara m ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ seedy ebe nke na ogbe ndịda LA ọ bụ nnọọ a bit Nọmba anọ Ọ karịrị akarị Sacramento jupụtara na ọnụ ọgụgụ ndị bi n'obodo ahụ ugbu a 500,000 Obodo ahụ toro na ọnụego 1.4 pasent na-eme ka Sacramento bụrụ obodo na-eto ngwa ngwa na steeti California, ọ bụrụ na omume a na-aga n'ihu na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-erute gburugburu 2.5 nde mmadụ nọ na 2025, ọnụ ọgụgụ ahụ anaghị atụ m ụjọ ma ọlị, mana ejiri m n'aka na ha ga-akwụsịlata otu ụbọchị, ikekwe n'oge na-adịghị anya, ọ bụrụ na ọnụ ụlọ na-arị elu ugbu a, ha adịghị ọnụ ala site na ọtụtụ steeti sta ndards, but o bu California ya mere I kwesiri igbakwunye 30 percent nke anwu ozugbo ma nwee ike igwa ndi mmadu na I bi na California, na eziokwu na ndi abuo.
Otu n'ime ihe mere m ji hapụ California Ọ naghị adị m ka m kwụọ ụgwọ maka ihu igwe na ọ nweghịdị isi m itu ọnụ mgbe ụfọdụ enwere ndị enyi ole na ole bụ ndị m gwara m na m nwere enyi Keegan, ọ sịrị na ndị mmadụ nọ na-ajụ ya maka ya mgbe ọ na-ere ihe onwunwe n'akụkụ Sacramento, na-ekwu na ndị mmadụ na-ajụ maka ya na ndị na-egbu ọchụ ndị ọzọ dị ka ha na-arịọ maka Ga-ajụ ogige ndị dị nso ha kwuru na ọ bụ ihe ijuanya na ọ dịka ndị mmadụ nwere ndị na-egbu ọchụ na agbata obi, dị ka ebe ahụ bụ nchekwa data, ọ na-agwa gị ebe ha nọ ma anyị agaghị ewere ha ma ọ bụ ihe ọ bụla? Ọ gwụla ma ị bi n'okpuru nkume ma ọ bụ nọrọ oge ka ukwuu na ebe nsọ enyi iji nweta uto achịcha udo n'ọnụ gị, ma ọ bụ na onye na-egbu ọla edo steeti mere mpụ na Sacramento County site na 1984 ruo 1986, emesia na Southern California, a matala onye ahụ ugbu a dịka Joseph D'Angelo na ọ bụbu onye uwe ojii. E jidere ya n'ihi DNA nke nna nna ya. O doro anya na otu n'ime ndị ikwu ya mere otu n'ime nyocha DNA ahụ ma ọ gbanye sistemụ ha ka ha wee nyochaa ya wee nweta DNA ya ma achọpụtara m na ọ bụ onye ahụ dị ihe dị ka afọ 70 ma ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ugbu a. Ọ bụ ọnụọgụ abụọ na anwụ na-acha ọkụ ruo oge ndụ ya niile. Agụrụ m otu isiokwu afọ ole na ole gara aga na ọ fọrọ nke nta ka m kwuo banyere ya na California ọzọ, mana ọ na-egbutu oge ọ bụla n'isiokwu a gụrụ na ndị mmadụ na-aga n'akụkụ a nke California bụ nanị ihe nfụkasị na-ebibi, nke na-eme ka uche zuru oke ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla ọzọ gbara gburugburu Sacramento ma ọ bụrụ na ịnweghị ihe nfụkasị ị nwere ike mgbe ị rutere Sacramento, akụkụ nke ọzọ nke isiokwu ahụ gbasara ndị na-enweghị ' t ghota otu anwu siri sie na akpukpo aru ha mgbe ha buru uzo mbu si na S trand nke di na ndida California ma jiri otutu otutu uzo sọọfụ ma dina ala na osimiri ma ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ bụ obere mkpirisi m gwara ya banyere ya. na sunscreen na ahịhịa ahịhịa bụ ezigbo ndị enyi gị na California.
Ọ tụrụ aro ka otu ụlọ ọrụ akpọrọ Murad mu R AD nye m ma agbanyeghị na ha anaghị akwụ m ụgwọ maka naanị ịnwale inyere gị aka iyi mkpuchi anwụ na ọnụ ọgụgụ nke ndụ ị masịrị ịkwụ ụgwọ ihe niile? Ọ bụrụ na inwere ego buru oke ibu, ị bụ ụdị onye na - ekwu ihe dịka ego abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahụ, buru ụfọdụ ola edo o Bentley na ụgbọala gị gaa Sacramento California Achọtala m ụlọ ọhụrụ gị. Ego obibi na Sacramento dị oke egwu, ọ dịkwa njọ ka San Francisco otu awa na ọkara ọwụwa anyanwụ.
I kwesiri ịtụ anya na nri dị na Sacramento ga-abụ pasent 17 dị elu karịa nke mba, ebe njem na ụlọ dị 30 na 20 pasent karịa ọkwa mba, ngụkọta ego obibi nke obodo ahụ dị ihe dịka 16 pasent karịa ọkwa mba, na okwu ndị ọzọ, California na-emeso gị dị ka onye nzuzu maka iji Carlock Banyere ịkwaga California ọ bụghị ọnụ ala, nke ahụ bụ ihe kachasị njọ banyere California bụ na ọ na-efu, ihe niile na-efu karịa nke ahụ mere ọtụtụ mmadụ ji aga nke ọma, ndị a bụ isi ihe iri m. ịghara ịkwaga na Sacramento ma ọ bụrụ na ị na-eche Sacramento naanị ịdọ aka ná ntị ka ị gaa ebe ahụ ọ dị njọ n'agbanyeghị agbanyeghị echefula njikọ niile dị n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ịdenyebeghị aha biko nwee ụbọchị ọmarịcha mmadụ niile ma nwee ụbọchị ọmarịcha ibe ha
Ego ole bụ Uber ruo ọdụ ụgbọ elu Sacramento?
N'okpuru nkwekọrịta ekwuputara na Tuesday, ndị njem na-eji yaUberisi na site naSakramentiInternationalỌdụ ụgbọ eluga-akwụ ụgwọ $ 1.25 maka ụgbọ ala UberX mgbe ọ bụla ma ọ bụ ụgbọ ịnyịnya nwere ike ịnweta na $ 1.75 maka ụgbọ ala,ọdụ ụgbọ elundị isi kwuru na Tuesday.Septemba 1 2015
Hey, Abụ m Sarah na taa m ga-anọ na ndu gị na New York City. Taa, aga m agwa gị otu esi esi na ọdụ ụgbọ elu New York banye na etiti obodo na-enweghị isi. Taa, anyị ga-ekwu maka ọdụ ụgbọelu, e nwere atọ n’ime ha, JFK, LaGuardia na Newark.
acronym maka nkwonkwo ụkwụ ya
Ugbu a ndị mmadụ na-abịa ebe a, ha na-ajụkarị m ọdụ ụgbọ elu ole m ga-efega? Azịza ya bụ n'ezie tiketi dị ọnụ ala. Ọ nweghị ihe ọ mere. Ọ dị mma? Cheta ya.
Ọ nweghị ihe ọ mere! Taa, m ga-esi n’ọdụ ụgbọ elu ọ bụla kpọga gị n’etiti obodo ma gosi gị ụzọ dị ọnụ ala ị ga-esi ruo ebe ahụ. Malite na JFK, LaGuardia na Newark. Ọ bụrụ n ’isi n’otu ọdụ ụgbọelu na-abịa, i nwere ike ịtaba n’akụkụ ndị a ebe a.
Mana rue oge ahụ, anyị ga-amalite njem anyị site na ọdụ ụgbọ elu New York ruo na etiti obodo n’akwụghị ego niile ị nwere. Ọ bụrụ na ụgbọ elu gị na-efe efe na JFK, ụzọ kachasị mma iji ruo ogbe ndịda bụ iwere AirTrain wee gaa n'ihu n'okporo ụzọ okporo ụzọ Long Island. Nke a na-ewe nkeji iri atọ na ise ma kwụọ ụgwọ site na dollar itoolu ruo iri na ise, dabere na oge nke ụbọchị.
Iji AirTrain, ihe niile ị ga - eme mgbe ị na - ebu ibu bụ ịchọ maka ihe ịrịba ama ndị na - ekwu AirTrain ma soro ha. Ọ na-abụkarị ụlọ elu ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya jụọ onye na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu ma ha nwere ike igosi gị ebe ahụ. Ozugbo ị kwụsịrị AirTrain ị ga-ahụ ụfọdụ ntụgharị.
Tupu ịbanye na uzo ndị a, ị ga-azụrịrị tiketi ahụ. Ọ bụ dị ka na-akwụ ụgwọ mgbe iji AirTrain. Ọ ga-efu dollar ise wee banye n'okporo ụzọ okporo ụzọ Long Island.
Ọ dị mfe. Mgbe ị ga-apụ AirTrain, soro akara maka Long Island Railroad. Ọ dị n'ụzọ ziri ezi n'ihu ntụpọ ụgbọ elu AirTrain mgbe ị gafesịrị site na ntụgharị.
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịzụta tiketi iji gaa Penn Station. Yabụ ịnọ n'ọdụ Jamaica, ị ga-aga Penn Station. Nke a na-ewe ihe dị ka nkeji 20 na ụzọ kachasị mfe iji zụta tiketi gị ka bụ site na ngwa MTA.
Nwere ike ibudata ngwa MTA ha n'ekwentị gị. Ọ dị mma? Ya mere, ọ dị ka nke a. Ya mere, lee, ị banyere tiketi ịchọrọ ịzụta.
Site na ọdụ Jamaica gaa na Penn Station. Aga m ewere tiketi ụgbọ oloko otu ụzọ m ga-aga na mpụga oge ọsọ n'ihi na ọ bụ ugbu a, mana gbaa mbọ hụ na ị ga-eleba anya tupu oge elekere gị na ọsọ ọsọ ga-agbanwe. Ugbu a, m tinye ozi kaadị akwụmụgwọ m wee chọta tiketi aga obere akpa tiketi gị wee pịa ya.
Ọ dị mkpa ka ị rụọ ọrụ tiketi mgbe ị dị njikere ịbanye. Ọ dị ezigbo mkpa. Otu ihe m chọrọ ịmara ebe a bụ na ọ bụrụ na ị na-eme njem na ngwụcha izu, ị nwere ike nweta tiketi maka dollar anọ.
Nwere ike nweta tiketi maka dollar anọ site na ịzụrụ tiketi obodo ma m ga-agụnye njikọ ya n'okpuru isiokwu a. Yabụ ọ bụrụ na ịnọ na ngwụsị izu, ị nọ n'ọdịmma ebe a ka ị ga-echekwa ọtụtụ ego. Yabụ na ụgbọ oloko na-abịa n'oge adịghị anya, yabụ m ga-eme ka tiketi ahụ rụọ ọrụ ugbu a.
Ma nke a bụ ihe ọ dị ka ya, na nnoo ihe niile ị ga - eme ugbu a bụ ịbanye n'ụgbọ oloko wee gosi onye na - eduzi gị tiketi gị na akara ngosi ga - egosipụta nke ọ ga - enyocha ma ọ bụ nke ahụ! Na-anọ n'ụgbọ okporo ígwè ruo mgbe ị ruru PennStation. Ọ bụ ya! Mgbe ịpụ na Long Island Railroad na Penn Station, ị bụ n'ụzọ nkịtị n'etiti etiti ihe ahụ. Ga-anọ na Penn Station.
Nke ahụ dị n'okpuru Madison Square Garden na n'ime obodo ahụ. Can nwere ike n'ụzọ nkịtị ọ bụla ụgbọ okporo ígwè si ebe a. Nwere ike ịga New Jersey, ị nwere ike ịga ebe ọ bụla site na Penn Station, mana nke a na-eme ka ị nọrọ n'etiti obodo ma chekwaa gị ego.
Ọ bụrụ na ị na-abịa n’ọdụ ụgbọ elu LaGuardia, ekele, ugbu a ị nwetala ọdụ ụgbọ elu kachasị amasị m na New York City. Ọ dị naanị nkeji iri atọ na ise site na etiti obodo. Nke ahụ buru ibu ma e jiri ya tụnyere Newark.
Na mgbakwunye, ọ na-efu naanị dollar abụọ na 75 cents. Ọ dịkwa oke ma e jiri ya tụnyere Newark n'ihi ya, echere m na mgbe m kwuru na ọ nweghị ọdụ ụgbọ elu dị mma, m ghaara ụgha banyere ya n'ihi na ọ bụ ụdị - ọ bụghị Newark. Ma LaGuardiaJFK dị jụụ.
Ozugbo i buliri akpa gị ebe a, ihe niile ị ga - eme bụ ịgbaso ihe ịrịba ama maka bọs ọha na eze wee banye na bọs M60, mana ị ga-azụta tiketi maka ya ma ugbu a, m ga - egosi gị otu esi eme ya. Ugbu a maka otu oge. Hapụ ọdụ ụgbọ elu, jiri ụgbọ ala M60 gaa Astoria Boulevard.
Mana tupu ị banye bọs, ịkwesịrị ịzụta tiketi maka ya. Ọ bụ $ 2.75 n'ụzọ ọ bụla ma ị ga-eji igwe tiketi ụgbọ oloko.
Nke a bụ ohere gị ịzụta MetroCard na m ga-egosi gị otu esi eme ya, mana ka anyị zụta tiketi anyị maka M60 ugbu a. Nke a bụ ihe MetroCard dị ka ya. Ugbu a usoro iji zụta ụgbọ ala M60 dịtụ iche karịa ịzụta kaadị Metro, mana ọ dị mfe ịgbaso usoro atọ dị mfe edepụtara n'elu n'elu igwe a.
Ha bụ ndị dị mfe. Mbụ m ga-akụ 'mmalite'. Ọzọ m tinyere MetroCard m na igwe.
Mgbe ahụ, m ga-agbakwunye $ 2.75 ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwee ego na MetroCard gị dịka m mere, ọ ga-ewepụta tiketi Youthis ozugbo. Tiketi ahụ ebe a bụ ihe ị tinyere na bọs mgbe ị banyere.
Busgbọ ala ahụ ga-akpọrọ gị gaa Astoria Boulevard. You're mara ezigbo mma ọkara. Ọzọkwa, ihe banyere bọs M60 bụ na ọ dịgasị dabere na oge ọbịbịa mana ọ na-abịa ugboro ugboro.
fuji transonic 2.8 nyochaa
O nwere ike ịbụ ebe ọ bụla site na nkeji asatọ ruo nkeji iri atọ, dabere na ụbọchị na oge nke ụbọchị. Naanị lelee oge m jikọtara n'okpuru ma kwado njem gị tupu oge eruo. Ka batara na New York na ụzọ dị ọnụ ala ma dịkwa oke ọnụ iji gafere bụ sistemụ ụgbọ oloko MetroCard.
Inweta tagzi nwere ike ịdị mfe ma ọ bụrụ na ị na-agagharị na mpaghara, mana ọ bụghị naanị were ụzọ ụgbọ oloko. Nke a bụ otu esi enweta otu. Ọ dị mma ka ị kụrụ 'mmalite', họrọ asụsụ gị, buru ụzọ mee 'Standard Subway Card' nke mbụ ị ga - emerịrị 'kaadị ọhụrụ' ugbu a ma ọ bụrụ na ịnọ ebe a ụbọchị ise ma ọ bụ karịa, ana m akwado MetroCard na-akparaghị ókè.
Dị ka o kwesịrị, ụbọchị iri asaa kachasị mma ị nwere ike inweta. Nke a na - enye gị ohere naanị gị, yabụ ọ bụrụ na gị na otu ọ bụla na - eme njem, ị ga - azụrịrị kaadị na - akparaghị ókè iji nwee ịnya ịnyịnya na - akparaghị ókè. Ugbu a ụbọchị 7 gafere bụ $ 32 nke ị nwere ike ịgafe na snap.
Elezie $ 2.75 ma ọ bụrụ na ihichapụ onye ọ bụla n'otu n'otu. Yabụ ọ bụrụ n’echiche ịme njem ugboro abụọ n’ụbọchị, ị ga-enweta ego gị.
Yabụ ọzọ, ọ bụrụ na ị bịara ebe a ụbọchị ise ma ọ bụ karịa, biko jiri MetroCard a na-akparaghị ókè. Mgbe ahụ i nwere ike ịzụ ahịa na ego, ATM, ma ọ bụ akwụmụgwọ. Ozugbo ị rụsịrị ụgbọ ala, gaa n'okporo ụzọ ụgbọ oloko Astoria Boulevard.
Tragbọ oloko 'N' na 'W' biara ebe a, ị ga-akpọrọ ha na Queensboro Plaza. Ozugbo ị banyere n'ụgbọ 'N' ma ọ bụ 'W' ị nwere ike iburu nke a na Queensboro Plaza. Lee, ị ga-azụ ụgbọ oloko 7.
Ọ bụ odo odo. Na mberede, ụgbọ oloko New York na-akpọ naanị aha ha, ọ bụghị na agba ha. Nwere ike iburu nke a na Grand Central, nke dị nkwụsị anọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ụlọ nkwari akụ gị dị na Times Square, ị nwere ike iburu ya na Times Square.
N'oge a, ịkwesịrị ịchọpụta ọdụ ụgbọ oloko nke dị nso ụlọ nkwari akụ gị wee gbanwee ụzọ gị dabere na nke ahụ. Nwere ike ime nke a site na ịlele Google Maps. Mgbe ị rutere Newark, ị ga-ahụ na e nwere n'ezie ọnụ atọ na ọdụ ụgbọ elu a.
Ọ baghị uru n ’ebe ụgbọ elu gị nọ dị ka ọdụ ụgbọelu na-eburu ọdụ niile. Ihe ị ga - eme bụ ịga larịị otu, nke ahụ bụ ebe m nọ ugbu a, m ga - apụkwa gaa bọs bido ebe a. Enwere ọdụ ụgbọ elu Newark Express.
Ọ bụ ebe a. Were ya ebe a. Ihe ị ga - eme bụ igosi ha tiketi gị na ekwentị gị.
Gbaa mbọ hụ na ị zụtara tiketi gị n'ịntanetị tupu oge eruo. Ọ bụrụ na ị gaa NewarkAirportExpress.com ị nwere ike ịzụta tiketi ahụ.
Tiketi njem okirikiri bụ $ 30 na tiketi otu ụzọ bụ $ 17. can nwere ike dee m koodu ahụ ma ha ga-ezitere gị njikọ wee nweta ihe na njikọ dị ka nke a na onye ọkwọ ụgbọ ala ga-enyocha ya na mgbe ahụ ị ga-abanye bọs na ị na-anọdụ ala n'oche ndị a dị mma ma straight na-aga ozugbo na etiti obodo. Ọ dị oke mma, dị mfe.
Nwere ike were tagzi ma ọ bụ Uber, mana ọ dị oke ọnụ. Ana m enyocha ekwentị m ugbu a. Onwere ebe akpọrọ aha ebe a ị nwere ike ịbanye na Uber, ịnweghị ike ịbanye na Uber ebe ọ bụla.
Ọ kwesịrị ịnọ n'otu ebe ka ịgbaso ntuziaka dị na ekwentị gị mgbe ị mere nke a. Ọnụ ego dị ọnụ ala karịa ebe a bụ $ 52. Ọ bụrụ n’onweghị di ma ọ bụ nwunye, gaa naanị New York ma ọ bụ zute ndị ebe a.
biya na igwe kwụ otu ebe
Nke ahụ dị oke ọnụ. Nke ahụ bụ $ 50. Mana ị nwere ike ịnara Newark Airport Express ma ọ bụ naanị $ 17.
Were Uber ma ọ bụrụ na ị bụ otu nke anọ ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na enweghị gị anọ ma ọ bụ karịa, mgbe ahụ ọ ga-aka mma ka ị gaa ụzọ m tụrụ aro n'isiokwu a, bọs m nọkwa ebe a. Ka ahụ oge n'adịghị anya! You banye ụgbọ mmiri ahụ, buru ya Manhattan ọ ga-akpọrọ gị gaa ọnọdụ atọ enwere ike, ha niile na 42nd Street.
Nke mbụ dị na Port Authority, nke dị nso na Times Square. Ya mere, ọ bụrụ na ịnọ ebe ahụ, pụọ ebe ahụ. Nke abụọ bụ Bryant Park na nke atọ bụ Grand Central wee hụ na ị ga-apụ na nkwụsị kacha nso na họtel ị na-anọ.
Daalụ maka isoro m na njem m site na ọdụ ụgbọelu niile New York ruo na etiti obodo. Ọ bụrụ na isiokwu a na-amasị gị, soro m na Instagram. Ejirila m ọtụtụ ihe na New York.
Denye aha, lelee ederede ndị ọzọ nke New York City na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ. Daalụ maka ikiri!
Enwere m ike isi na uber pụọ n'ọdụ ụgbọ elu Sacramento?
Uberbụ a pụrụ ịdabere na nhọrọ maka njem n'isi ndịọdụ ụgbọ elu. Dabere na nkwekọrịta ọrụ naọdụ ụgbọ elu, ndị na-agba ịnyịnyanwere ikea ga-adaba na njedebe ha rịọrọ na ọkwa Ọpụpụ.
Kedu ihe bụ uber XL?
UberXLoche ndị otu buru ibu nke ndị njem 6 nọ na SUV ma ọ bụ obere ụgbọala. yaUberXLugbo ala bu ndi obere ugboala na SUV dika Honda Pilot, Dodge Caravan, GMC Acadia, wdg.Uber XLbụ nhọrọ ziri ezi maka nnukwu otu ndị chọrọ ịnwe ụgbọ ala kachasị ọnụ maka mmadụ 5 ma ọ bụ karịa.bọchị 2020
Uber ọ na-aga ọdụ ụgbọ elu Sacramento?
Uberbụ a pụrụ ịdabere na nhọrọ maka njem n'isi ndịọdụ ụgbọ elu. Dabere na nkwekọrịta ọrụ naọdụ ụgbọ elu, Ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịdata na njedebe ha rịọrọ na ọkwa Ọpụpụ.
Ndi Uber ndi Uber na acho ego?
Ntinye akabụ afọ ofufo. Etinyeghi atụmatụ n'ụgbọ njem, ma atụghị anya ma ọ bụ chọọ. Dị ka onye na-agba ịnyịnya,gịiwu abụghị inye gịọkwọ ụgbọ alaihe na-atọ ọchịego. Ọ bụrụgịkpebiegịga-amasị mn'ọnụ ọnụ, gịọkwọ ụgbọ alanabata ya.
Kedu ka m ga-esi nye Uber oche 7 oche?
Arịrịọ. Mepee ngwa ma banye ebe ị na-aga 'Ebee ka?' igbe. Ozugbo ị kwadoro nnabata nnabata gị na ebe adreesị gị ziri ezi, họrọ UberXL na ala ihuenyo gị. Kpatụ Kwenye UberXL.
Ndi Uber mara mgbe ikwuputa?
UberNdị na-agba ịnyịnya n'ihe karịrị ahịa 100 nwere ike ịchọpụta ihe ọhụụ mgbe emecharahamezue njem: nhọrọn'ọnụ ọnụọkwọ ụgbọala ha. Mgbe olenke giọkwọ ụgbọ alagị,haỌzọkwa agaghịmaraọ bụrụgị'natipped, ya mere ihe ojoon'ọnụ ọnụ- ma ọ bụ mban'ọnụ ọnụ- agaghị emetụtanke giogo.07.07.2017
Ndị ọkwọ ụgbọala Uber ọ na-edobe ndụmọdụ ha niile?
Ee, dị ka nkọwa ya, an'ọnụ ọnụaga 100% na-eweta ọrụ ma ọ bụ ihe ọzọ ọ bụ 'ego' nke ụlọ ọrụ na-ewere akụkụ. Nke ahụ bụ iheUberego bụ na ị kwụrụ ụgwọ maka ịnya ụgbọ ala, ụgwọ a na-ekewa n'etitiUbernaọkwọ ụgbọ ala. Yabụ,n'ọnụ ọnụdị iche ma na-aga 100% naọkwọ ụgbọ ala.
Enwere ọrụ Uber na Sacramento CA?
Uber Sacramento - Uber na-enye UberX, UberXL na ọrụ ndị ọzọ na Sacramento. Lelee ọnụahịa maka ịnya ụgbọ ma ọ bụ ihe ọkwọ ụgbọ ala ma malite ịkpata ego! Bụrụnụ ndị na-akwọ ụgbọala Sacramento & amp; vellip; California Uber Sacramento– E nwere ọrụ asatọ & nbsp; ọrụ na-enye na mpaghara Sacramento: 1.
Etu esi akpọtụrụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Uber na San Francisco?
Nọmba ekwentị: 1-415-986-2104 Nọmba Faksị: 1-877-223-8023 Nọmba Ọrụ Ndị Ahịa: 1-866-576-1039 Labels: Adreesị, mkpesa, Kpọtụrụ, ratelọ ọrụ, ọrụ ndị ahịa, Isi ụlọ ọrụ, HQ, Office , Offlọ ọrụ, nọmba ekwentị, Nyocha, Nyocha, San Francisco, Nkwado, Uber
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji nyocha Uber na Sacramento?
Nnyocha chọrọ dị iche site na obodo - nweta nkọwa gbasara Sacramento n'okpuru. Na Sacramento, ndị ọkwọ ụgbọala niile ga-agarịrị nyocha ụgbọ ala na ọnọdụ Uber Greenlight tupu ha emee njem mbụ ha. Nke a na-ewe ihe na-erughị nkeji iri atọ. Mara na Uber anaghị ekpuchi ụgwọ nyocha.